‘रविजी पत्रकार नै होइन, उहाँलाई किन जबरजस्ती पत्रकार बनाईंदै छ ?’- किशोर श्रेष्ठ – Hamrosandesh.com
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रवि लामिछाने पत्रकार नभएको बताएका छन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा श्रेष्ठले रवि लामिछाने पत्रकार नै नभएको बताएका हुन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा श्रेष्ठले प्रश्न गरे,‘उहाँले आफैं भनिरहनुभएको छ म पत्रकार होइन, प्रेस पास लिन्न तपाईं किन उहाँलाई जबरजस्ती पत्रकार बनाइरहनु भएको छ ?’ त्यसपछि पत्रकार धमलाले प्रश्न गरे : उसो भए रवि जी पत्रकार होइन ? किशोर श्रेष्ठ : सारा मेन स्ट्रिमका मिडिया हेर्नुहोस्, टिभि कार्यक्रम प्रस्तोता भनेर लेखेको छ । पत्रकार उहाँले नै होइन भनिरहनुभएको छ त तपाईं को उहाँलाई पत्रकार भन्ने ? ऋषि– किन उहाँ पत्रकार होइन ? किशोर श्रेष्ठ– सूचना विभागलाई न्यूज २४ ले पठाएको विवरणमा रविको कर्मचारी नम्बर १९ भनेको छ । एउटा विदेशी कर्मचारी कसरी हुन्छ ? श्रम इजाजत पनि थिएन । उहाँले मलाई कसले छुन सक्छ भन्दै सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्नुभयो । उहाँ चाहिं के कानून भन्दा माथि हो ? उहाँको बारेमा छानविन गर्न नपाउनु ? कानुन तोडेर बस्ने मान्छे उहाँ चाहिं के त ? अरुलाई औंला ठड्याउने मान्छो आफू शुद्ध हुनु पर्दैन ?
ऋषि– रविको गिरफ्तारीको ग्रयान्डडिजाइनमा किशोरसहित धेरैको नाम जोडिएको छ.. किशोर श्रेष्ठ– के किशोर श्रेष्ठ उहाँको प्रतिस्पर्धी हो ? के किशोर श्रेष्ठले उहाँको खोरिया फाड्दिएको छ ? उहाँको कुनै कार्यक्रलाई आँच पुराउने काम गरेको छ ? उहाँको साहु अनिल जोशी बारे धेरैलाई थाहा छ । इराकमा १२ जना नेपाली मारिदा काठमाडौं नै ध्वस्त हुने अवस्था बनेको थियो । ति १२ जना नेपालीलाई कसले पठाएको थियो ?कसको म्यानपावरले पठायो ? अनिल जोशीको म्यानपावरले ? इतिहासको हेक्का राखियोस् । रवि लामिछानेको पछाडिको भीडको डरले भन्न डराउने चितवनका तिलक गैरेले मसँग यति पैसा मागियो मैले यति बुझाए भने । शंकरापुरको एउटा कलेजसँग कति पैसा उठाइयो ? उहाँको भाग कति हो ? उहाँको टीमले कति उठायो ? छानवीन हुँदै गर्ला । भीडको दवावले अहिले म बोल्न रोकिउँला । तर अर्को पुस्ताले सत्यको उत्खनन गवर्छ । त्यसैले क्षणिक लहडमा उम्लिन पर्ने छैन ।